Etu esi etinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi, Xiaomi
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. Ma ị bụ onye nzuzu ịhụ na ọ dị naanị n'asụsụ Chinese, ọ dịkarịa ala na eze na ruo mgbe a tọhapụrụ ngwa ngwa mba ahụ ebe ahụ maka ọnwa Septemba nke afọ a, echegbula ebe ọ bụ na ebe a na Androidsis n'ụzọ dị mfe Anyị ga-akụziri gị otu esi etinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish.
Na vidiyo m hapụrụ gị ka ị gbanye na otu post a, m ga-egosi gị ụzọ dị mfe iji tinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ma ghọta ọrụ niile nke mgbaaka ọrụ ahụ a na-ewu ewu. Chinese ika na-enye anyị. Na mgbakwunye na ịkọwa usoro niile ị ga-agbaso site na nzọụkwụ, ị ga-enwe ike ịchọta ngwa dị mkpa iji nweta tinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish n’ihe gbasara nkeji ole na ole.
Na vidiyo m hapụrụ gị na mbido nke post a, m na-akọwa usoro ị ga - agbaso site na nkwụsị, usoro a na - ejedebe ịgbaso usoro ndị a ka m hapụrụ gị n'okpuru:
Anyị na-aga ngwa ngwa Mi Fit ngwa yana site na nhọrọ ahụ My Profaịlụ / Mi Band 3 anyị na-aga na ala nke ihuenyo, na ala nke ihe niile na anyị wepu Xiaomi Mi Band 3.
Anyị na-ebudata ngwa a gbanwere nke ụdị kacha ọhụrụ nke Xiaomi Mi Fit.
Site ntọala nke gam akporo anyị anyị na-eme ka nhọrọ ahụ nwee ike wụnye ngwa site na isi mmalite.
Anyị na-etinye APK ebudatara na mbụ wee banye na akaụntụ Xiaomi anyị.
Anyị na-achọ na anyị jikọtara Xiaomi Mi Band 3.
Nke a ga-ezu nke na, ozugbo ejikọtara Xiaomi Mi Band 3, nke a Nweta mmelite ngwa ngwa nke ga-etinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish. Nke a emeworị mgbe Xiaomi wepụtara femụwe iji dozie nsogbu ahụ Mi Band 2 anaghị ejikọta, ya mere ọ bụ oge tupu anyị enwee mmelite iji tinye ya na Spanish.
Ọ bụ ezie na usoro nke nbudata na ịwụnye ngwa ngwa ọhụụ na Spanish maka Mi Band 3 na-adịgide, ọ ga-ekwughi nke ahụ mgbaaka ahụ ga-anọrịrị nso na smartphone ebe ị tinyere ngwa Mi Fit na nke jikọrọ ya.
Nke a bụ a femụwe update usoro na-adịghị ewe nkeji abụọ iji wuchaa kpamkpam. Usoro, nke na njedebe na Dị ka a ga - asị na site na anwansi, Xiaomi Mi Band 3 ga - etinye anyị na Spanish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi etinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish
I meela nke ukwuu, a na m eche ka ọ bịarute, m nọ na-eche maka iji ya n'asụsụ Chinese mana ahụrụ m na o mebighị. Aga m agbalị ime ya. Daalụ maka ntinye
Anaghị emelitere m ma site na usoro nke vidiyo gị ma ọ bụ jiri ngwa ọrụ, gịnị ka m ga-eme?
Isiokwu gị bara ezigbo uru n’anya m, mana enwere m nsogbu; Mgbe m gbalịrị ijikọ mgbaaka na mobile, ozugbo ọ chọtara ya, ọ na-agwa m ka m tinye nọmba mgbaaka ahụ (nọmba 4) ma ebe ahụ ana m arapara n'ihi na enweghị m nọmba a:
Nwere ike ịgwa m otu m ga-esi mee ya?
Ana m echere ozi gị.
Zaghachi Josep Valls
N'ehihie, nsogbu m bụ nke na-esote n'abalị a, bluetooth m agala mgbe m na-ehi ụra, agbalịrị m itinye ya mana amaghị m ihe na-atụ uche m na etinye ya na Bekee ... nwere azịza ya
Abali oma, agbasoro m usoro gi ma mgbe m meghere ngwa nke izitere anyi na njikọta, o kweghi m banye, agbalịrị m Facebook, Google na akaụntụ m, mana enwere m njehie na ha niile. Ha ga-enwe obi ọma ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, n'ihi na enwere m ụdị nke ndị China m zụtara maka nne m na ọ nweghị ike iji ya n'asụsụ Chinese
Zaghachi Oscar Ortiz